लकडाउनलाई कवि विप्लव प्रतीकका सिफारिस - फिचर - कान्तिपुर समाचार
चैत्र २४, २०७६ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — सरकारले आजबाट वैशाख ३ सम्मलाई लकडाउन अवधि थपेको छ । घरभित्र आफूलाई थुनेर राखेकाहरुलाई लकडाउन झेल्न पक्कै गाह्रो भएको होला । कवि विप्लव प्रतीक भने आफू सँधै घरभित्रै रमाउने व्यक्ति भएको बताउँछन् ।
उनी खाली समय कोठाभित्रै बसिरहन्छन् । खासै बाहिर निस्किरहेका हुँदैनन् । त्यसैले उनका लागि लकडाउन नयाँ होइन । लकडाउनका कारण भने बिहान-बेलुकी टहल्न उनले पाएका छैनन् ।
यसलाई पनि उनले सामान्य रुपले नै लिएका छन् । किनकि उनलाई थाहा छ, कुनै कुराको सुरु हुन्छ भने अन्त्य पनि हुन्छ । 'जुन सुरु हुन्छ, त्यो अन्त्य हुन्छ । त्यो अन्त्य नहुञ्जेलसम्म त्यो चिज फेरि फर्केर आउँदैन । फेरि म यसरी बस्न चाहें भने पाउँदिन म । यो अवस्थालाई सेलिब्रेट गर्दैछु,' उनले भने ।
जनताले लकडाउन उलंघन गरेको खबर सुन्दा भने उनलाई नरमाइलो अनुभव हुन्छ । 'दैनिक कामगरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्नुपर्ने मानिसहरु के गरिरहेका होलान्, उनीहरुलाई कसले हेर्छ होला, कसको दायित्व हो, मेरो हो कि होइन, सरकारको हो कि त्यततर्फ सोचिरहेको हुन्छु,' उनले सुनाए,'सरकारले गर्नुपर्ने काम के हो ? त्यो पनि गरेको देखिँदैन । विचित्र खालको अनुभव भइरहेको छ ।'
उनी हरेक दिन कविता, गीत लेखिरहेका हुन्छन् । दैनिक एउटा फिल्म हेरिरहेका छन् । लेख्ने, पढ्ने काममै आफ्नो लकडाउन समय बितिरहेको उनी सुनाउँछन् । फुर्सदको समयमा कौसी बढार्छन् । 'मेरो कौसीमा ३० किलो धुलो रहेछ । अरुबेला सफा देखिन्थ्यो । त्यो पनि फालें,' उनले भने ।
कवि विप्लवले पाठकका लागि पाँच पुस्तक सिफारिस गरेका छन् । यस्ता छन् उनका रोजाइ :
अमङ दि बिलिभर्स, भी. एस. नयपाल
यो औपन्यासिक शैलीमा लेखिएको यौटा यात्राको कथा हो । तर, दृष्यावलोकन, प्रकृतिको विचरण र वास्तुकलाको विवरणभन्दा पृथक छ यो यात्रा कथा । इरान, पाकिस्तान, मलेशिया र इन्डोनेशियामा लेखकले गरेको भ्रमणको माने अर्कै छ । यसमा त्यस्ता इस्लामी युवायुवतीहरुको कथा भेटिनेछ जसलाई लेखकले यात्राको सिलसिलामा प्रत्यक्ष भेटे जो मुसलमान थिए र जसलाई आफ्नो धर्मको मौलिक रुपको खोजी थियो । र, त्यस रुपको पवित्रतालाई उनीहरु पुनः हासिल गर्न चाहन्छन् । धार्मिक आस्था र ती मुलुकहरुको तत्कालीन समाज समेत चित्रित यस किताब फरक धर्माबलम्बी एवं नास्तिकहरुका लागि पनि बडो पठनीय छ ।
ग्रेप्स् अफ र्‍याथ, जन स्टेनबेक
अमेरिकीहरुले सन् १९२९ ताका भोग्नु परेको ‘ग्रेट डिप्रेसन’ को पृष्ठभूमिमा लेखिएको उपन्यास हो यो । ओक्लोहामाबाट भोकमरी, आर्थिक सङ्‍कट, कृषि उद्योगमा आएको परिवर्तनका कारण प्रमुख पात्रको परिवार आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्ने खोजीमा यात्रा गर्छन् । सङ्‍कटका बेला मानिसमा देखिने मानसिक रुपान्तरण मात्र होइन, मानिसमा रहेको आम मनोभावनालाई लेखकले बडो सुक्ष्म ढङ्गले चित्रण गरेका छन् । पाठकलाई गहिरो सोचको इनारमा पुर्‍याएर अर्थपूर्ण दृष्टिकोणको दैलो खुलाईदिने लेखकको प्रयास स्तुत्य लाग्छ मलाई ।
दि स्ट्रेञ्जर, अल्बर्ट कामु
‘दि आउटसाइडर’ भन्छन् यस किताबलाई बेलायतीहरु । कामुको अस्तित्ववादी चिन्तनको पृष्ठभूमिमा लेखिएको यस उपन्यास पाठकको नियमित सोचलाई हल्लाइदिन र जीवनलाई फरक कोणबाट हेर्ने संघारमा पुर्‍याउन सफल छ । एउटा मान्छे नियतिको चक्रमा कहाँबाट कहाँ पुग्न सक्छ र उसका आरोह अवरोह कसरी निर्माण हुन्छन् भन्ने कुरा बडो रोचक, विचारोत्तेजक र मननीय ढङ्गबाट पुस्तकमा चित्रित छ ।
फादर्स एण्ड सन्स, इभान तुर्गनेभ
सन् १८६२ मा तत्कालीन रुसी समाजलाई पृष्ठभूमिमा लेखिएको यस उपन्यासमा दुई अलग पिँढीको सोचमा रहेको असमानता, अलग दृष्टिकोण र भिन्न सोचलाई चित्रण गरिएको छ । निहिलिज्ममा आधारित दर्शनलाई केन्द्रविन्दुमा राखिएर बुनिएको कथा रोचक ढङ्गले उघारिँदै जान्छ । उपन्यास सिद्धिसकेपछि धेरै समयसम्म पाठक सोचको भूमरीमा पर्न सक्छ, तर भूमरी सिद्धिएपछि उसका सोचहरु पानी परेको पहाड जस्तै सफा हुने सम्भावना प्रशस्त छ । हरेक घटना र सम्वाद मिहिनेतकासाथ लेखिएका छन् कि पाठकलाई सिनेमा हेरिरहेको आभास हुन्छ ।
सिद्धार्थ, हर्मन हेस
एउटा अर्को क्लासिक उपन्यास । पुस्तक प्रकाशित भए यताका हरेक पिँढी जो जिन्दगी र मानव व्यवहारको रहस्यबारे चिन्तन गर्न रुचाउँछन्, तिनका लागि बारम्बार पुर्नपठनको खजाना हो 'सिद्धार्थ' । पूर्वीय दर्शन, रहस्य र मनोविश्लेषण मिसिएको यस उपन्यासमा पात्रको स्वअन्वेषण, सामञ्जस्य र शान्तिप्रति आफ्नै मौलिक धारणाहरु छन् । कसैको अनुयायी भएर जीवनयात्रा गर्नुभन्दा दम्भरहित साधक भएर आफ्नो मार्ग आफैँले खन्नु जीवनसत्यको करीब पुग्नु हो भन्ने निश्कर्ष पाठकले निकाले भने त्यो आश्चर्य हुनेछैन ।
प्रकाशित : चैत्र २४, २०७६ १७:४३